Dr. Tint Swe's Writings: September 2017
နံနက်ခင်းနဲ့ မနက်ခင်း ဘယ်ဟာမှန်ပါသလဲခင်ဗျာ
နံနက်ခင်းကအမှန်။ နံနက်မိုးသောက်၊ နက်ဖြန်ခါလို့ရေးပါတယ်။ မနက်ဆိုတာ စကားအရာမှာတော့သုံးတယ်။ အရင်က နံက်လို့လည်းရေးခဲ့ကြတယ်။
နံကာလ = ဝါခေါင်လ
နံကိုင်း = နံရံ = နံဘေးဘက်
နံတောင် = နံတောင်း = နံပါး
နက် = နက်ကျော = မည်းသည်၊ မဲသည်
နက် = မလွယ်ကူ၊ မတိမ်၊ ခဲယဉ်းသည်
နက်ကိ = အနှစ်အရသာရှိသည်
နက်တံ = အနှေးအလျင်စုံစမ်းခြင်း၊ အနက်၏အတံ
နက်တစ် = အစဉ်မပြတ်
နက်ရှိုင်း = နက်နက်နဲနဲ = နက်စွာသော
နက်သတ် = နက္ခတ်တာရာ
Immunizations before marriage အိမ်ထောင်ပြုမည့် အမျိုးသမီးသူများအတွက် ကာကွယ်ဆေးများ
အသက်၂၇ နှစ်။ အမျိုးသမီး။ နောက်နှစ်ထဲအိမ်ထောင်ပြုမှာပါဆရာ။ ပတ်ဝန်ကျင်ကလူတွေပြောအရအိမ်ထောင်မပြုခင် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသင့်တယ်ဆိုပြီး သိထားပါတယ်ရှင့်။ ၂၆ နှစ်ကျော်ရင် သူများတိုင်းပြည်တွေမှာမထိုးပါဆိုပြီး ဆရာ ပြောလို့သိရပါတယ်။ ယခုထိုးသင့်မထိုးသင့်ကို မေးချင်ပါတယ်ရှင့်။ ဘာ့ကြောင့်ဆိုတာကိုလည်း ဖြေကြား ပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။
- Blood group matching before marriage လက်မထပ်ခင် သွေးအုပ်စုစစ်ဘို့ အရေးကြီးသလား http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/matching-blood-group-before-marriage.html
ဖေ့စ်ဘွတ်က အခုပဲ ပေါ်လာတာ။
Tint, your friends have loved your posts 34,000 times! We're glad you're sharing your life with the people you care about on Facebook. Here'salook at some photos your friends have loved.
Love စာလုံးကို သူများတိုင်းပြည်တွေမှာသုံးတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုအရသုံးတာ မတူပါ။ သူတို့ဆီမှာ အတော်ကို ခပ်လွယ်လွယ်သုံးကြတယ်။ Like ထက်ပိုသုံးတယ်။ စားစရာတခုခု ကြိုက်သလားမေးတာကို အိုင်လဖ်အစ်လို့ဖြေတယ်။
၂၃-၉-၂ဝ၁၇ နေ့က 33,000 times တဲ့။ တပတ်တိတိမှာ တထောင်တိတိတိုးလာတာ။ ကျွန်တော်က တစ်ရာတွေ၊ တစ်ထောင်တွေ ဘယ်လောက်လျော့သလဲကို လဖ်လုပ်ချင်တယ်။
ဆရာဒေါက်တာတင့်ဆွေ မင်္ဂလာပါခင်ဗျ။ ကျနော့့် News Agency သတင်းဌာနကပါ။ ဆရာ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးပို့စ်တွေကို ကျနော်တို့ ပေ့ခ်ျမှာပြန်တင်ခွင့်ပေးနိုင်မလားခင်ဗျာ။
(၁) ပုံတွေနဲ့တွဲရင် ပုံတွေက အများသူငါအမြင်မှာ တင့်တယ်တာဖြစ်ရပါမယ်။
(၂) သတ်ပုံတွေကို မပြင်စေလိုပါ။ အထူးသဖြင့် တကိုမလိုအပ်ဘဲ တစ်လုပ်ထားတာကို မလုပ်စေလိုပါ။
(၃) ကျွန်တော့်အမည်ကိုလည်း ဒေါက်တာတင့်ဆွေလို့သာ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသုံးစေလိုပါသည်။ ဆရာကြီးစတာ မပါစေလိုပါ။
ဆရာ မြန်မာပြည်မှာ ရေသန့်တံဆိပ်တွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မသန့်တာတွေလဲရှိပါတယ်။ ရေသန့်စက်ကထွက်တဲ့ရေကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာရေက pH level 8.5 ဖြစ်နေပါတယ်။ သောက်သုံးရန်သင့်ပါသလား။
ရေနဲ့အရည်တိုင်းကို pH တိုင်းတာတဲ့အခါ မတူတာတွေတွေ့မယ်။ pH7ထက်နည်းတာကို အက်စစ်ဓါတ်လို့ သတ်မှတ်တယ်။ များတာကို ဘေ့ဆစ်ဓါတ်။
သန့်တဲ့ရေ Pure water မှာ pH7ရှိတယ်။ သောက်နိုင်တယ်။ ဓါတုဗေဒလို နူထရယ်လို့ခေါ်တယ်။
Surface water systems ခေါ် မျက်နှာပြင်ရေရဲ့ pH က 6.5 ကနေ 8.5 အထိရှိတယ်။
Groundwater systems ခေါ်မြေအောက်ရေရဲ့ pH က6ကနေ 8.5 အထိရှိတယ်။
Natural Unpolluted rainwater မိုးရေသန့်မှာ pH 5.6 ရှိလို့ အက်စစ်ဓါတ်ဖြစ်တယ်။ လေထဲက Carbon dioxide ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကိုစုပ်ယူထားလို့ဖြစ်တယ်။ Carbonic acid (H2CO3) ကာဗွန်နစ်အက်စစ်ဖြစ်လာတယ်။ အပျော့စားအက်စစ်ဖြစ်တယ်။ မိုးရေအများစုမှာ pH 4.0 ကနေ 5.5 အထိရှိတယ်။
Acid Rain အက်စစ်မိုးဆိုတာ Nitrogen oxide နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ Sulfur dioxide ဆာလ်ဖါဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေ ပါနေတာကိုခေါ်တယ်။
သောက်ရေသန့်တွေ တံဆိပ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရောင်းတယ်။ pH နည်းနည်းစီ မတူကြပါ။
• Walmart Drinking Water = 4.5
• Dassani = 5.0
• Walmart Distilled Water = 5.0
• Ferrarelle = 6.1
• Deer Park = 6.3
• Fiji Water = 6.65
• Evian = 7.53
• Evermore = 9.23
Alkaline water အယ်လ်ကာလိုင်းရေက pH level များတယ်။ ကောင်းပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အက်စစ်ဓါတ်ကို ပျယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့ ကောင်းတာဖြစ်တယ်။ pH of 8 ကနေ9အထိရှိတာကို အယ်လ်ကာလိုင်းရေခေါ်တယ်။ အယ်လ်ကာလိုင်းရေထဲမှာ ကယ်လ်စီယမ်၊ စီလီကာ၊ ပိုတက်ဆီယမ်၊ မက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ ဘိုင်ကာဗွန်နိတ်တွေ ပါနေတယ်။ အယ်လ်ကာလိုင်းဖြစ်လွန်းတာလည်း မကောင်းပါ။ များသွားရင် Metabolic alkalosis ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ စိတ်မကြည်လင်တာ၊ အန်တာ၊ လက်တုန်တာ၊ ကြွက်သားလှုပ်တာ၊ မျက်နှာနဲ့ ခြေလက်တွေ ကျဉ်တာဖြစ်မယ်။
Distilled water ခေါ် ဆေးထိုးရာသုံးတဲ့ အရပ်ခေါ်မိုးရေကို သောက်လို့ရပါတယ်။ သဘာဝဓါတ်ဆားတွေတော့မပါလို့ အရသာမရှိပါ။
ကိုယ်ဝန် ၃၁ ပတ်မှာ ကလေးက ၄.၉ ပေါင်ဆိုတာ ပုံမှန်လားရှင့်။ ဆရာဝန်က အရမ်းထွားတယ်ပြောလို့ပါ။ ပုံမှန်က ဘယ်နှစ်ပေါင်ရှိရတာလဲရှင့်။
ကိုယ်ဝန် ၃၁ ပတ်မှာ 3.31 ပေါင်ကပုံမှန်ဖြစ်။
1. Chili and Politics ငရုပ်သီးနဲ့ နိုင်ငံရေး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chili-and-politics.html
2. Chili plant ငရုတ်ပင် https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/chili-plant.html
3. Chili ငရုတ်သီး အရသာ https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chili.html
4. Taste types အရသာအမျိုးမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2016/08/taste-types.html
1. Best Cooking Oils အကောင်းဆုံး စားသုံးဆီများ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/01/best-cooking-oils.html
2. Castor oil ကြက်ဆူဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/castor-oil.html
3. Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chicken-eggs.html
4. Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cholesterol-and-food.html
5. Cholesterol ကိုလက်စထော http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/cholesterol.html
6. Coconut oil အုန်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/coconut-oil.html
7. Cooking Oils စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/trans-fats.html
8. Cooking Oils စားသုံးဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/cooking-oils.html
9. Healthy Cooking Oils ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသုံးဆီများ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/healthy-cooking-oils.html
10. Heart-Healthy Cooking Oils နှလုံးရောဂါနဲ့ စားသုံးဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/heart-healthy-cooking-oils.html
11. High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များလို့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/high-cholesterol-diet.html
12. Mustard oil မုန်ညင်းဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/mustard-oil.html
13. Oils ဆီအမျိုးမျိုး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/08/oils.html
14. Palm oil and Coconut oil စားအုန်းဆီနဲ့ အုန်းဆီ https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/palm-oil.html
15. Saturated Fatty Acids and Health risks ဆီ၊ အဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး • Chicken eggs and Cholesterol ကြက်ဥနဲ့ (ကိုလက်စထော) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/chicken-eggs.html
16. Trans Fats ကျန်းမာရေးနှင့် မသင့်သော စားသုံးဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/trans-fats.html
17. Trans Fats အညာသားများဆီစားကြသည် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/cooking-oils.html
1. Ajinomoto ဟင်းချိုမှုန့် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/ajinomoto.html
2. Chicken flavored broth and health risks ကြက်သားမှုန့် နဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/chicken-flavored-broth-and-health-risks.html
3. Dashi and Sweetening Agents ဟင်းခပ်မှုန့်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/sweetening-agents.html
4. MSG Criticisms Should Be Taken With A Grain Of Salt ဟင်းချိုမှုန့် သတင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/09/msg-criticisms-should-be-taken-with.html
ကြော်ငြာဆေးတွေမရောင်းပါဆိုတာလည်း ဖြေရလွန်းလို့ စာကပ်ထားလိုက်တယ်။
2. Adoxy Cellfood အမေးများတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/adoxy-cellfood.html
3. Advertisement ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ ကြော်ငြာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/advertisement.html
4. A-Ra collagen ထိုင်းကလာတဲ့ ကြော်ငြာဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/skin-whitening-injection.html
5. Baschi Pink Quick Slimming ပိန်ဆေးကြော်ငြာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/baschi-pink-quick-slimming.html
6. Bee pollen ပန်းဝတ်မှုံ အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bee-pollen_19.html
7. Calcium height up ဆရာဝန်မတတ်နိုင်တဲ့ရောဂါ
8. Commercial medicine ဆေးလှလှလေးတွေ ဝယ်ကြမလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/commercial-medicine.html
9. Commercial products ကြော်ငြာဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/commercial-products.html
10. Commercial treatments ကြော်ငြာဆေး ထပ်မေးလာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/commercial-treatments_15.html
11. Commercial ကြော်ငြာပါရစေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/commercial.html
12. Counterfeit အတုရှိရာ အညံ့တွေလာ အဆိပ်တွေပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/counterfeit.html
13. Date Rape Drugs သတိလစ်စေရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့်ဆေးဝါးများ
14. Dirty drugs ညစ်ညမ်းဆေးဝါးများ
15. Dirty Medicines ညစ်ညမ်းဆေးတွေ
16. Fake medicines and China ဆေးအတုနဲ့ တရုပ်ပြည် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/fake-medicines-and-china.html
17. Fake Medicines come from Neighbors ဆေးအတုတွေ ဘယ်ကနေလာသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/fake-medicines-come-from-neighbors.html
18. Fake Medicines from China and India (1) တရုပ်နဲ့ အိန္ဒိယကလာတဲ့ဆေးတွေ သတိပေးပါရစေ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fake-medicines-from-china-and-india-1.html
19. Fake Medicines from China and India (2) တရုပ်နဲ့ အိန္ဒိယကလာတဲ့ဆေးတွေ သတိပေးပါရစေ (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/fake-medicines-from-china-and-india-2.html
20. FDA warns of liver injury from muscle-building supplement ကြွက်သားအားကောင်းအောင်သုံးတဲ့ဆေး သတိပေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/fda-warns-of-liver-injury-from-muscle.html
21. FillyMor ဖြေရတာမောတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/fillymor.html
22. Herbal medicines Va liver and heart diseases တူမနဲ့ အဒေါ်ကို ရန်တိုက်ပေးခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/herbal-medicines-and-liver-and-heart.html
23. Herbal medicines တိုင်းရင်းဆေး မေးခွန်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/herbal-medicines.html
24. Herbal medicines ကြော်ငြာဆေး မေးပြန်ပြီ
25. Herbs vs. Drugs တကယ့်ဆေးနဲ့ ကြော်ငြာဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/herbs-vs-drugs.html
26. High demand ကြော်ငြာဆိုတာ သည်းခြေကြိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/high-demand.html
27. High up High plus High demand အရပ်ရှည်ဆေး (သို့) စိတ်မရှည်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/09/high-up-high-plus-high-demand.html
28. High Up-Calcium USA အရပ်ရှည်ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/high-up-calcium-usa.html
29. Love Coffee ညစ်ညမ်းကော်ဖီ
30. Medicine Ad ကြော်ငြာဆေးနောက်တမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/medicine-ad_15.html
31. Medicine advertisement ကြော်ငြာဆေးအမေးကနေ သက်တမ်းတိုစေတယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/medicine-advertisement.html
32. Medicines for profit ကြော်ငြာဆေးနောက်တမျိုး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/medicines-for-profit_15.html
33. Patient safety first လူနာမျက်နှာကြည့်ကြပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/patient-safety-first.html
34. Roadside medicines အရပ်ဆေးနဲ့ လမ်းဘေးဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/roadside-medicines.html
35. Self-styled medicines ကြော်ငြာဆေး ဘေးဖြစ်နိုင်တယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/self-styled-medicines.html
36. Sex coffee ညစ်ညမ်းလက်ဖက်ရည်၊ လေဒီကော်ဖီ
37. Skin Whitening Injection အသားဖြူဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/skin-whitening-injection.html
38. Slimming Products, Man and woman Sex products http://www.facebook.com/pages/Slimming-Products-Man-and-woman-Sex-products/163476080361622
39. Unapproved medicines ကြော်ငြာဆေးတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/unapproved-medicines.html
40. Unknown အသက်မပါနဲ့ ကြော်ငြာဆေး အမေးများ
41. Vimax and Breast ကျားဆေး-မဆေး ကြော်ငြာပြီးရောင်းတဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/vimax-and-breast.html
42. Virginity medicine Ad အပျိုစစ်နဲ့ ဆေးအစစ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/virginity-medicine-ad.html
43. Weight loss pills are dangerous ပိန်ဆေးတွေအန္တရာယ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/weight-loss-pills-are-dangerous.html
စားသောက်တိုင်မှာလုပ်တဲ့သူ နေ့စာ ညစာ မပူရတဲ့့
1. Babies and vitamins ကလေးငယ်နဲ့ ဗီတာမင် http://doctortintswe.blogspot.com/2016/01/babies-and-vitamins.html
2. Banana Diets ငှက်ပျောသီး-အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-2.html
3. Bee pollen granules ပျားကနေထုတ်တဲ့ဆေး http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/bee-pollen-granules_19.html
4. Breast Milk Storage နို့ရည်ကို ဘယ်လိုထားသိုမလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/breast-milk-storage.html
6. Calcium blood test (ကယ်လ်စီယမ်) စစ်ဆေးခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/02/calcium-blood-test.html
10. Cholesterol and food ကိုလက်စထောနဲ့ အစားအစာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/cholesterol-and-food.html
12. Cirrhosis Diet အသည်းခြောက် အစားအသောက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/digestive-myths.html
19. Diet and cancer ကင်ဆာ နဲ့ အစားအစာ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/diet-and-cancer.html
20. Diet forabreastfeeding mom (1) နို့တိုက်မိခင် ဘာစားချင်လဲ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2015/01/diet-for-breastfeeding-mom-1.html
22. Digestive Myths အစားအစာမှာ အထင်မှားနေတာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/cirrhosis-diet.html
23. Eggs and Sprite အားဖြစ်တယ်ဆိုလို့ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/eggs-and-sprite.html
25. Evening primrose oil ညနေခင်း နှင်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/06/evening-primrose-oil.html
26. Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ် http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/folic-acid.html
27. Food combination အစားအစာ ဘယ်လို တွဲစားသင့်ပါသလဲ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/food-combination.html
28. Food for and not for Diabetes http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/food-for-and-not-for-diabetes.html
29. Food for health အစားအသောက် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/food-for-health.html
30. Food Storage and Safety Guidelines အစားအသောက် သိုလှောင်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/food-storage-and-safety-guidelines.html
31. Foods for Healthy Hair ဆံပင် အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/foods-for-healthy-hair.html
32. Hard-Boiled Egg Vs Fried Egg ကြက်ဥကျော်နဲ့ ကြက်ဥပြုတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/hard-boiled-egg-vs-fried-egg.html
33. High Calorie Food (ကယ်လိုရီ) များတဲ့ အစားအစာများ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2010/07/high-calorie-food.html
34. High Cholesterol diet (ကိုလက်စထော) များလို့ မစားသင့်တဲ့အစားအစာတွေ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/high-cholesterol-diet.html
36. Iron supplement and Liver diseases သံဓါတ်နဲ့ အသည်းရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/iron-supplement-and-liver-diseases.html
37. Iron supplements သံဓါတ်အားဆေး http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/01/iron-supplements.html
41. Nutrition Facts အမြစ်-အသည်း ခွဲသိရအောင် http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2011/03/nutrition-facts.html
42. Nutrition for women အမျိုးသမီးများအတွက်အာဟာရ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/08/nutrition-for-women.html
43. Nutrition အာဟာရ http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/12/nutrition.html
46. Omega-3 (အိုမီဂါ သရီး) ဘာလို့ နာမည်ကြီး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/11/omega-3.html
49. Saturated Fatty Acids and Health risks ဆီ၊ အဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/saturated-fatty-acids-and-health-risks.html
50. Supplementary foods ကလေးအတွက် ဖြည့်စွက်စာ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/supplementary-foods.html
58. Vitamin B complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b-complex.html
59. Vitamin B12 and Iron supplement ဘီ-၁၂ နှင့် သံဓါတ်လိုအပ်ချက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/vitamin-b12-and-iron-supplement.html
64. Vitamins and memory ဗီတာမင်တွေက မှတ်ဥာဏ်တိုးစေနိုင်သလား http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/vitamins-and-memory.html
ဈေးရောင်းရလို့မောတဲ့ခါ တောမုန့်ဟင်းခါးလေး အားပေးလိုက်ပါတယ်။
KFC နဲ့ တောမုန့်ဟင်းခါး https://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/kfc.html
၁။ တခုမေးချင်လို့ပါဆရာ။ သေချာ နဲ့ သေခြာ ဘာယ်ဟာအမှန်လဲ ခင်ဗျ။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ သေချာ နဲ့ သေခြာ ဘယ်ဟာအမှန်လည်း ဖြေပေးပါလားခင်ဗျ
သေချာကအမှန်။ ကျွန်တော်လည်း ခဏခဏမှားတယ်။ ပဌမမေးခွန်းပါ တစ်ကိုတော့ ကျွန်တော့်ပို့စ်မှာသုံးတာဖြစ်လို့ ပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ ဆောရီး။
သေတုပ္ပလ (ကြောဖြူ ကြာပုဏ္ဍရိတ်)
သေန = သေနင်္က (စစ်၏အစိတ်အပိုင်း စစ်ဆင်စစ်ခင်း)
သေရည် = သေစာ (မူးယစ်စေတတ်သောအရည် ယစ်မျိုး)
သေသပ် ဟုတ်ဘူးလားဆရာ။ အသေသတ်ဆိုရင်တော့ တသတ်ပေါ့ မြန်မာစာတော်တော်ခက်တယ်ဗျာ။
သေန = သေနင်္က (စစ်၏အစိတ်အပိုင်း- စစ်ဆင်စစ်ခင်း)
သေရည် = သေစာ (မူးယစ်စေတတ်သောအရည် - ယစ်မျိုး)
မှတ်ချက် = လယ်တီဆရာတော်နဲ့ အရင်ထုတ်သတ်ပုံစာအုပ်အရ သေသတ်ဖြစ်တယ်။
စားသုံးဆီတွေထဲမှာ အရောင်လှအောင်ထည့်တဲ့ ဓါတုဆေးတွေက ဘေးဖြစ်စေနိုင်တယ်။ စားသုံးဆီ ကောင်း-မကောင်း အနံ့အသက်နဲ့ အရောင်ကြည့်ပြီး ပြောမရပါ။ ဆီထဲမှာ စုစုပေါင်းအဆီ၊ ပြည့်ဝဆီဘယ်လောက်လဲနဲ့ ကလိုရီ ဘယ်လောက် ရစေသလဲဆိုတဲ့ အချက် (၃) ချက်ကို ကြည့်ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ စားသုံးနေကြတဲ့ စားအုန်းဆီကနေ ပြည့်ဝဆီအများကြီးရစေတယ်။ ပြည့်ဝဆီနည်းတာက ကျန်းမာရေးအရ ကောင်းတယ်။ အုန်းသီးကနေထုတ်တဲ့ဆီက ၃ မျိုး ရှိတယ်။
ဆီအမျိုးအစား - (ကလိုရီ)၊ - အဆီ (စုစုပေါင်း)၊ - ပြည့်ဝဆီ၊ = မှတ်ချက်
1. Coconut oil အုန်းသီးဆီ (ကလိုရီ) ၁၁၇၊ အဆီ (စုစုပေါင်း) ၁၃့၆၊ ပြည့်ဝဆီ ၁၁့၈ = အများဆုံး၊
2. Palm kernel oil စားအုန်းဆီ (ကလိုရီ) ၁၁၆၊ အဆီ (စုစုပေါင်း) ၁၄၊ ပြည့်ဝဆီ ၁၁့ဝ = အများဆုံး၊
3. Palm oil စားအုန်းဆီ (ကလိုရီ) ၁၂ဝ၊ အဆီ (စုစုပေါင်း) ၁၃့၆၊ ပြည့်ဝဆီ ၆့၇ = များတယ်။
ကလိုရီ၊ - အဆီ (စုစုပေါင်း)၊ - ပြည့်ဝဆီ၊ = မှတ်ချက်
1. Cottonseed oil ဝါစေ့ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၃့ဝ၊ = ပြည့်ဝဆီမနည်းပါ၊
2. Peanut oil မြေပဲဆီ ၁၁၉၊ ၁၃့၅၊ ၂့၃၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းမပါ၊
3. Soybean oil ပဲပုပ်ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၂့ဝ၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
4. Sesame oil နှမ်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၉၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
5. Sunflower oil နေကြာဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၈၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
6. Flaxseed oil ပန်းနှမ်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၃၊ = ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး။
1. Vegetable oil အသီးအနှံဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ဝ့၉၊ = ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
2. Almond oil မက်မွန်ဆီ ၁၁၉၊ ၁၄၊ ၁့ဝ၊ = ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
3. Grapeseed oil စပျစ်စေ့ဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၃့၆၊ ၁့၃၊ = ပြည့်ဝဆီအနည်းဆုံး၊
4. Hemp seed oil ဆေးခြောက်စေ့ဆီ ၁၂၆၊ ၁၄၊ ၁့၅၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
5. Walnut oil သစ်ကြားသီးဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၁့၅၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
6. Avocado oil ထောပတ်သီးဆီ ၁၂၄၊ ၁၄၊ ၁့၆၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
7. Olive oil သံလွင်ဆီ ၁၁၉၊ ၁၃့၅၊ ၁့၉၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
8. Corn oil ပြောင်းဆီ ၁၂ဝ၊ ၁၄၊ ၂့ဝ၊ = ပြည့်ဝဆီနည်းတယ်၊
9. Smart Balance Margarine မာဂျရင်း ၈ဝ၊ ၉၊ ၂့၅၊ = ပြည့်ဝဆီမနည်းပါ၊
10. Butter ထောပတ် ၁ဝ၂၊ ၁၁့၅၊ ၇့၃၊ = ပြည့်ဝဆီအများဆုံး။
စားသုံးဆီထဲမှာ (ကိုလက်စထော) ဘယ်လောက်များသလဲက ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးတယ်။ များလေ မကောင်းလေ။ ယူနစ်အဖြစ် parts per million (ppm) နဲ့တွက်ပါတယ်။
1. Safflower ပန်းစေ့ဆီ =7ppm
2. Coconut အုန်းဆီ = 15 ppm
3. Palm စားအုန်းဆီ = 16 ppm
4. Palm kernel စားအုန်းဆီ = 25 ppm
5. Sunflower နေကြာဆီ = 26 ppm
6. Soybean ပဲပုပ်ဆီ = 26 ppm
7. Canola ပန်းနှမ်းဆီ = 53 ppm
8. Peanut မြေပဲဆီ = 54 ppm
9. Corn ပြောင်းဆီ = 57 ppm
Healthy Cooking Oils ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသုံးဆီများ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတွေမှာ ကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေပါဝင်လျက်ရှိခေါင်းစဉ်နဲ့ သတင်း ဆောင်းပါးတပုဒ်ကို အခုပဲဖတ်ရပါတယ်။ အဲဒီစာထဲမှာ ဒီလိုရေးထားပါတယ်။
နေကြာဆီနဲ့ ပြောင်းဆီစတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတွေမှာ နှလုံးရောဂါနဲ့ (ဒီမင်းရှား) ခေါ် ဦးနှောက်ရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်ရှိဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်တွေက သတိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆီတွေအစား သံလွင်ဆီကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် စားအုန်းဆီ၊ ထောပတ်နဲ့ ဝက်ဆီတို့ဟာ တခြားဆီတွေထက် သာလွန် ကောင်းမွန်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆီကြော်အစားအစာတွေကို ရှောင်ပါ။ ဆီသုံးမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ အဆိပ်ရှိ ဒြပ်ပေါင်းပါဝင်မှုနည်းပါးတဲ့ ဆီမျိုးကို ရွေးသုံးပါ။ နေကြာဆီ ဒါမှမဟုတ် ပြောင်းဆီကို သုံးပြီးကြော်ထားတဲ့ ငါးကြော်ဟင်းမှာ aldehydes ဒြပ်ပေါင်းဟာ စိတ်ချရတဲ့ ပမာဏထက် အဆ ၂ဝဝ ကျော် ပိုမိုပါဝင်နေတာ တွေ့ရှိရတယ်။ ကိုလက်စထရော ဖြစ်ပေါ်မှုအားမပေးတဲ့ polyunsaturated fats အဆီကြွယ်ဝတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ဒြပ်ပေါင်း အမြောက်အများကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး သံလွင်သီးနဲ့ အခွံမာစေ့တွေကနေရတဲ့ monounsaturated fat ဆီတွေကတော့ ဒီဒြပ်ပေါင်းတွေကို အနည်းအကျဉ်းသာ ထုတ်ပေးတယ်လို့ ဘာသာပြန် ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီသတင်းဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ လန်ကပ်စတာမှာရှိတဲ့ ပါမောက္ခ မာတင် ဂရုဗဲလ်ဒ်ကပြောတာကို အခြေခံရေးသားထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့စွဲက ၂၈-၇-၂ဝ၁၅ နေ့က ဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာဟာ နှစ် ၂ဝ ကျော်ကတည်းကလက်ခံထားတဲ့ အချက်နဲ့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲတာနဲ့ နောက်ဆုံး အကောင်းဆုံးစားသုံးဆီတွေက ဘာလည်းလို့ လိုက်ရှာရပါတယ်။
အမေရိကန်နှလုံးအသင်းကနေ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော စားသုံးဆီတွေ တင်ထားတာကို တွေ့ပါတယ်။ ၁၂-၄-၂ဝ၁၆ နေ့က အပ်ဒိတ်လုပ်ထားတာပါ။
ပြည့်ဝဆီ နဲ့ ထရန့်စ်ဆီ ခေါ် ပြန်ကျော်ဆီတွေဟာ အညံ့စားဆီတွေဖြစ်တယ်။ (မိုနိုအန်စက်ကျူရိတ်တက်) နဲ့ (ပေါ်လီအန်ဆက်ကျူရိတ်တက်) ဆီတွေဟာ နှလုံးအတွက်ကောင်းတယ်။
အစိုင်အခဲဆီခေါ် ထောပတ်၊ မာဂျရင်းတွေနဲ့ အပူပိုင်းဒေသဆီ ခေါ် စားအုန်းဆီနဲ့ အုန်းဆီတွေမသင့်ပါ။ အဲတာတွေဟာ (စက်ကျူရိတ်တတ် ဖက်) ခေါ် ပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်လို့ ကျန်းမာရေးအတွက် မသင့်ပါ။
ပြည့်ဝဆီနည်းတဲ့ စားသုံးသင့်တဲ့ဆီတွေကို အက္ခရာစဉ်လိုက်ရေးပါမယ်။
• Canola ကင်နိုလာဆီ၊
• Corn ပြောင်းဆီ၊
• Olive သံလွင်ဆီ၊
• Peanut မြေပဲဆီ၊
• Safflower နေကြာဆီ၊
• Soybean ပဲပုပ်ဆီ၊
ကောင်းတာတွေက သီးနှံဆီတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲတာတွေအပြင် ထောပတ်သီးဆီ၊ စပျစ်စေ့ဆီ၊ ဖွဲနုဆီ၊ နှမ်းဆီတွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ Partially hydrogenated oils ခေါ် (ထရန့်စ်ဆီ) ကတော့ မကောင်းပါ။ ဆီလက်ဖက်ရည်တဇွန်းထဲမှာ Saturated fat ပြည့်ဝဆီ4grams ထက်နည်းရင် ကောင်းပါတယ်။ (ထရန့်စ်ဆီ) ဆိုတာ ကနေ့ခေတ်ပေါ် နာမည်ကြီး အနောက်နိုင်ငံ အစားအသောက်တွေမှာ သုံးနေတဲ့ဆီ ဖြစ်ပါတယ်။
• Coconut oil အုန်းဆီ၊ စားအုန်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/coconut-oil.html
• Palm oil စားအုန်းဆီ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/palm-oil.html
၁။ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်စားရတော့ ကောင်းလိုက်တာဆရာ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ အခွံဖယောင်းသုတ်ထားတဲ့ ပန်းသီးတွေပဲ စားနေရတုန်းဆရာရေ။
၂။ လတ်လတ်ဆပ်ဆပ်ပန်းသီးတွေ စားချင်တယ်။
လတ်လတ်ဘုန်းရင့် = ဘုန်းတော်ဖြင့်တောက်ပခြင်း
လတ်လတ်လောလော = ချက်ခြင်း၊ ခဏခြင်း
အကြီး၊ အလတ်၊ အငယ်
ဆရာ ဘယ်လိုစမ်းသက်မှုမျိူး လုပ်ရပါလည်ဆရာ။
ရောဂါကို ဆရာဝန်ပြသင့်။ သတ်ပုံကိုတော့ ကျွန်တော်ပြင်ပေးပါမယ်။ စမ်းသပ်လို့သာရေးရတယ်။
• မေးနည်းစည်းကမ်း ပို့လိုက်ပါတယ်။
• ဟုတ်ကဲ့ပါလို့သာ ရေးရတယ်။ ဘိုလိုရေးချင်ရင် ရက်စ်လို့သာရေးပါ။
ရေးထားတာ ၇ နှစ်ရှိပြီ။ မနှစ်ကဒီနေ့မှာတင်ခဲ့တာလို့ ဖေ့စ်ဘွတ်က နှစ်ပတ်လည်စာအဖြစ်အသိပေးလို့။
နက်ဖြန်အလှူနေ့၊ သားတွေကိုသင်္ကန်းဆီး၊ သမီးကိုနားသ၊ လာသမျှကို အဝကြွေးပြီး၊ အလှူမင်္ဂလာပွဲကြီး ဝှဲချီးလုပ်မှာပါ။ အလှူဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအဖို့ တသက်တာမှာ တခါတော့ လုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်ကြရတယ်။ အရပ်ကူ၊ လူဝိုင်း၊ ဆွေမျိုးတိုင်းလာကြ။ မိတ်ဆွေရင်းခြာတွေလည်း နီးသောဝေးသောမဟူ အလှူလာကြတယ်။ မနက်ဖြန်အလှူရက် စည်ချက်မကျန်ဘူးပြောရမှာပေါ့။
မကြာပါဘူး လိုပါလေရော၊ ခေါ်ပါလေရော။ နောက်တခါ ဒစ်ရ်ှပက်စာအုပ်ယူလာသူကို ညီတော်မောင်ဆရာသမားက စကားလည်းပါးလိုက်တယ်။ ဗိုက်ထဲမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်း တွေ့တယ်။ လာမှရမယ် တဲ့။ နက်ဖြန် အလှူရှိတာရော လူနာအခြေအနေရော သူ့ထက်သိတာ ရှိမှာမဟုတ်ပါ။ သန်းခေါင်ကျော်နေတာလဲ သူ့နာရီနဲ့ ကိုယ့်နာရီ အတူတူပါ။ ဒါပေမဲ့ အလှူလဲ ကုသိုလ်၊ ဆေးကုတာလဲ ကုသိုလ်၊ နှစ်ထပ်ကွမ်းကုသိုလ် ယူရမှာပေါ့။ အလှူ့အမရေ အိပ်နှင့်ပေတော့။
ခွဲခန်းထဲ တန်းဝင်တာနဲ့ လူနာကို ခါးထုံဆေး ထိုးပြီးသား၊ ဗိုက်ကိုလဲ ဖွင့်ထားပြီးသား၊ ဗိုက်ထဲက ကလေးကိုလဲ မြင်နေရပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ လားလာ့း ကလေးတခြား သားအိမ်တခြား။
အဲဒီခေတ်က ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာ မပေါ်သေးလို့ ပုံရိုက်မထားနိုင်လိုက်ပါ။ အဲဒီအချိန်က သုတေသနဆိုတာလဲ အားမပေးပါ။ မြန်မာပြည်မှာ စာတမ်းဖတ်စရာနေရာလဲ ကျဉ်းလွန်းလှပါတယ်။ မရှိ ရှိတာလေးနဲ့ မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးကြရတာကို သွားပြမိရင်လဲ ချို့တဲ့တာ၊ ဆင်းရဲတာကို လူမြင်ခံအောင် လုပ်ခွင့်မရှိပါ။ ဆရာဝန်ကိုလည်း အက်သစ် မကျ၊ မလုပ်ရလို့ ပြောခံရမှာ သေချာတာမို့၊ ဒီစာကိုဖတ်ရင်လဲ ဖစ်ရှင်လို့သာမှတ်ချင်မှတ်ပါခင်ဗျား။
- Ectopic Pregnancy (2) ထူးဆန်းသည့် ကိုယ်ဝန် (၂) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/pregnancy-outside-uterus.html
ယူအက်စ်ကိုရောက်လာတဲ့ မိဘနှစ်ဖြာ ဖရှက်ရှာတွေကို ဟိုဟိုသည်သည် သွားစေချင်လို့ သားအငယ်ဆုံးက အစီအစဉ်လေးတခုလုပ်ပါတယ်။ စနေ့တရက်မှာ အနီးအနားက ပန်းသီးခြံကို သွားဖြစ်ကြတယ်။
ဒေလီမှာလည်း ဆယ့်နှစ်ရာသီ ပန်းသီးရတယ်။ ခပ်စိမ်းစိမ်းနဲ့ အနီ-နီညိုရောင်နှစ်မျိုး။ အသားခပ်ပွပွနဲ့ ခပ်မာမာ။ တမျိုးစီ ကောင်းပါတယ်။ သွားလည်တဲ့ခြံထွက် (အခုထိ သိသမျှ) အကောင်းဆုံးပန်းသီးစားရတယ်။ မျက်စိနဲ့ တပ်အပ်မြင်နေရတဲ့ အပင်ကနေ ခူးဆွတ်ပြီး ရောင်းတာဖြစ်တယ်။ ကွန်တိန်နာတွေနဲ့ သယ်ရောင်းတာမဟုတ်။ ဖရိုဇင်းလည်းမဟုတ်။ ဖယောင်လည်းသုတ်မထား။ စားရတဲ့အရသာ သိသိသာသာကောင်းလှတယ်။ ပန်းသီးဖျော်ရည်ကလဲ ကောင်းမှကောင်း။
ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ပုံထဲကထက် ၃ နှစ်တိတိ ပိုအိုစာလာကြပြီ။ ပန်းသီးတွေကတော့ နှစ်တိုင်း အသစ်အသစ်တွေ သီးလာနေကြတယ်။ အမျိုးမှန်ပြီး သဘာဝဖြစ်တာတွေက ကောင်းတယ်။
Apple ပန်းသီး https://doctortintswe.blogspot.com/2017/09/apple.html
Why coat apple fruits ဖယောင်းသုတ် ပန်းသီး https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/why-coat-apple-fruits.html
၁။ ရှလွတ် သရေကျ နေပီဆရာ
ဆရာလုပ်တဲ့အကျင့်ပါလို့ သွားရည်လို့ရေးရတယ်။ ပြီလို့ရေးရတယ်။ သရေဆိုရင် ဘောလုံးပွဲ။ ပိပီဆိုတာ ခရာ။ Smile!
၂။ စကားလုံးတွေမှားနေတာက မြန်မာဇာတ်ကားတွေ ကြည့်လိုက်ပါခမျာ ကြေကြေနပ်နပ် မှားနေကြလိမ္မယ်။
ဆရာလုပ်တဲ့အကျင့်ကပါလို့ ကျေကျေနပ်နပ်လို့ ရေးရမယ်။ Smile!
၃။ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံတွေကို တချို့အလေးမထားကြတော့ဘူး။ အများညီ ဤ ကို ကျွဲ ဖတ်ဆိုတာလိုဖြစ်နေကြပြီ။
ပြင်လာကြတာ ဆရာသိတယ်။ ဂျာနယ်တချို့တောင် ပြင်လာကြတယ်။
ကောင်းတယ်။ Big Smile!
၄။ အစားအသောက်အောက်မှာ စာတောင်လာပြီလို့ရေးတယ်။
ဆာလို့ရေးရမယ်၊ စာဆိုရင် စာကလေးဖြစ်သွားမယ်လို့ရေးတော့ သူကလည်း ဟုတ်ဆရာလို့ ရေးပါတယ်။
၅။ တစ်မရေးသင့်တာကိုရေးလို့ ပြင်ပေးတော့၊ ဟုတ်ဆရာ ပြင်ရေးတော့မယ်တဲ့။
ပြုပြင်ရလွယ်ကူသူဆိုတာ များများမရှိပါ။ ဆုံးမရလွယ်သူလို့ရှိတယ်။ အခံပါရမီမရှိရင် ပြင်ဘို့မလွယ်၊ ဆုံးမရခက်တယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေပဲကြည့်။ ကိုယ့်ကျောင်းသူကျောင်းသာတွေပဲကြည့်။ တချို့သာ ရသွားကြတယ်။
ဒေါ်မြမြအေးက မအိပ်ခင်ပြောတယ်။ သတ်ပုံအတွက် ခံစားချက်တွေ သိပ်ထားမနေပါနဲ့။ ရမှာလည်း မဟုတ်ဘူးတဲ့။ ဘာမှပြန်မပြောမိပါ။ ခံစားချက်ဆိုတာကို ခုထိစဉ်းစာနေမိတယ်။ အိပ်ရာထဲမှာပါ ဆက်စဉ်းစားရအုန်းမယ်။ စဉ်းစားနေတာ တနှစ်တိတိရှိသွားပြီ။
သူငယ်ချင်းဆရာဝန်တယောက်က နှင်းဆီပန်းပုံနဲ့ တင်ထားတယ်။ တပင်ရွှေထီး ထိန်ညီးနှင်းဆီ မျှော်လေပြီတဲ့ လေပြေနွဲ့လျှင့့်
ကျွန်တော်တို့က ဖိုးသူတော်ဦးမင်းနဲ့ လူဦးမင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ စာတော့ပြန်ရေးလိုက်တယ်။
တောင်ငူခေတ်က တပင်ရွှေထီး တောင်သူတွေကို ဦးကြီးခေါ်တဲ့ခေတ်မှာ တစ်ပင်ရွှေထီးဖြစ်သွားရရှာတယ်။
ကုန်းဘောင်ခေတ် တပင်တိုင်မင်းသမီး တပါတီခေတ်မှာ တစ်ပင်တိုင်မင်းသမီးဖြစ်သွားရရှာတယ်။
ဘုရင်တွေမပေါ်ခင်က တပင်တိုင်မုံ့ဟင်းခါး၊ တစ်ပင်တိုင်မုံ့ဟင်းခါးဖြစ်သွားရတာ သက်ဦးဆံပိုင်ခေတ်မှာ။
ကျွန်တော့်ပို့စ်တခု = ဖိုးသူတော်ဦးမင်း - တပင်ရွှေထီး ထိန်ညီးနှင်းဆီ မျှော်လေပြီတဲ့ လေပြေနွဲ့လျှင့့်
ကွန်မင့်တခု = လေပြေ wrong လေပြည် right
ဟိုးအရင်ကတည်းက လေပြေလေညှင်းလို့လည်းရေးတယ်။ လေပြည်လေညှင်းလို့လည်းရေးပါတယ်။
ပလေလက်ချား = စကားပေါ့ပျက်
လေကွန့် = လေဝှေ့ = လေခတ်ခြင်း
လေချိုဖျန်းသည် = လေချိုလေအေးတိုက်သည်
လေလှစ် = လေတိုက်သည်
လေသောက် = လေသွန် = ဖြည်းညှင်းစွာတိုက်သောလေပြေ
ပြည်စိုး = တမန်တော်
ပြည်တီတီ = ပျက်ရယ်ပြုသည်
ကျောင်းရှေ့အုတ်နံရံ မှာစာရေးထားတာက မည်သည့်ယာဉ်မှ မရပ်ရ။ မှ လား မျှ လားဆရာ။
ဘယ်ကားမှလို့ရေးတာ သဒ္ဒါအရ မမှန်လို့ထင်ပါတယ်။ မည်သည့်ယာဉ်မဆိုလို့ စာလိုရေးသင့်တယ်။ ဘယ်ကားမ မရပ်ရ။ ဘယ်သူမ မဝင်ရလို့ စကားမှာပြောနိုင်တယ်။ ဘယ်သူ့မ လူမထင်။
သဒ္ဒါအရ မှဆိုတာ ထွက်ခွါရာပုဒ်ဖြစ်တယ်။ အခြေအနေတခုကို ဖေါ်ပြရာမှာလည်းသုံးတယ်။ သူမှာမှ ငါသွားမယ်။ ထင်ရှားအောင် ငါမှငါလို့လည်းသုံးတယ်။
ဘယ်ကားမျှလည်း မမှန်လောက်ပါ။ မျှဆိုတာက မျှတတယ်လို့ပြောတာ။ ပျမ်းမျှ။ အမျှဝေသည်။ ထပ်တူထပ်မျှ။ အနည်းငယ်မျှ။ အဘယ်မျှ။ ရေးမိသမျှ။
ကျွန်တော်က မြန်မာစာဆရာ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်တတ်လို့ ကိုယ့်စာကို ကိုယ့်သတ်ပုံနဲ့ရေးကြတာ သိပ်မပြောလိုပါ။ အထင်ကရစာတွေကို ၁၉၈၀ နောက်ပိုင်းမှာ သတ်ပုံပြင်ခိုင်းတယ်။ သတ်ပုံပြင်ပြီး စာအုပ်ထုတ်ရောင်းစားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ရတဲ့ ဒဟပ်ပန်းကဗျာကို နမူနာပေးပါရစေ။
ယဉ်မရိုင်း၊ အင်တိုင်းရယ်တဲ့ ခပ်ဆန်ဆန်။
လူမရောက်၊ ကူကျောက်ချောင် တောင်ကတုံးမှာ၊ စုရုံးကာ သူတို့ပေါက်ရှာကြ၊ အညှောက်ကြူကြူ မွှေးရှာဘူ့၊ အခေါက်ဖြူဖြူကလေးရယ်နှင့်၊ ကျေးငှက်ပျော်စံ။
ဇလပ်ဝါ ခတ္တာခပါတဲ့၊ သာတန်ဆောင် ဝါခေါင်လတွင်မှ၊ ပွင့်ဖူးကြချိန်အမှန်၊ ဝသန္တလေချိုဖျန်း။
ယဉ်မဆုံးနိုင်ဘူ့၊ ပင်လုံးကုန် ခိုင်ညှာတံမတော့၊ နံ့သာကျံ ဝါဖန်နှောပါလို့၊ ယဉ်တမူ မြင်သူမောလောက်ကဲ့၊ လောကဓာတ်ခန်းမှာလှ၊ ပြောစမှတ်ဆန်းပေရဲ့၊ တောဒဟပ်ပန်း။
အခုတော့ ယဉ်တစ်မူတဲ့။ ကဗျာပြင်အဖွဲ့ကြီး အဓွန့်ရှည်ပါစေ။ ကျောင်းသုံးစာအုပ်တွေမှာလည်း သတ်ပုံပြင်ထားတယ်။ သတ်ပုံပြင် မြန်မာစာပါမောက္ခကြီးတွေ ရာထူးမြဲကြပါစေ။
24-9-2017 ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာမှာပါတဲ့ ခေါင်းစဉ်တခုက အရှေ့အဖုံးမှာကျတော့ ကမ္ဘာ့အရေးမြော်တွေးရှုဆ ကုလသမဂ္ဂ၊ အတွင်းပိုင်းမှာကျတော့ ကမ္ဘာ့အရေးမျှော်တွေးရှုဆကုလသမဂ္ဂ ဆိုပြီး ကွဲလွဲနေပါတယ်ဆရာ ဘယ်တခုက အမှန်ပါလဲဆရာ။
အဆုံးအဖြတ်ပေးတာတော့ မဟုတ်ပါ။ မျှော်တွေးလို့လည်းရေးတယ်။ မြော်တွေးလို့လည်းရေးကြတာတွေ့ပါတယ်။
၁။ ဆုံဆည်း နဲ့ ဆုံစည်း ဘယ်ဟာ အမှန်လဲဆရာ။
၂။ ဆရာ ကျွန်မအခုဖြစ်နေတာက စီးစပ်ခုံက အောင့်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။
၃။ ဆရာရှင့် စီးစစ်တန်နှင့် စစ်တာ ကလေးမရှိဘူးပြနေတယ်။
၄။ ဆီးကပ်လား ဆည်းကပ်လားဆရာ။ မကွဲပြားလို့ပါရှင့်။
၅။ ကိုးကွယ်စည်းကပ်က အမှန်လား ကိုးကွယ်ဆီးကပ်က အမှန်လားဆရာ။
၆။ စီးသွားရင်လည်း တခါခါအဖြူရောင်တွေထွက်ပြီးမှ ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ (သေး၊ ကျင်ငယ်ကို စီး လို့ မရေးရပါ။ ဆီး လို့သာရေးရတယ်။
၇။ နောက်ထပ်လွဲကြတာရှိသေးတယ်ဆရာ ပျက်စီး နဲ့ ဖျက်ဆီး
နေဝင်ဆည်းဆာ (ဆည်းဈာ ယခင်အသုံး) လှပသည်။
ကြက်တောင်စည်းနဲ့ ကလေးမ လှမှလှ။
အသက်ကြီးပြီး အချိန်မစီးသူ မဖြစ်ပါစေနှင့်။
အရုဏ်ဆည်းဆာ၊ နေ့ချိန်ခါ၊ ညနေဆည်းဆာ၊ ညခင်းသာ၊ အချိန်ခါပိုင်းတော့ လေးပိုင်းပါ။
ဆည်းဆာချိန်မှာ မိဖတွေဟာ အိုနာလာ။ လုပ်ကြွေးပြုစုဘို့ရာ အချိန်ရသေးတာ သိပါ။
တိုင်းပြည်ကြီးဟာ အိုနာ၊ ပြုပြင်ရေးမှာ လုပ်ချိန်ရှိသေးတာလည်း သိပါ။
နေညိုတယ်ဆိုပေမဲ့ နေမဝင်သေးတာ သိပါ။
ကျွန်တော် အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်လောက်က စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ဘူးတယ်။ ငါကြီးလာရင် အိမ်မှာ စာကြည့်ခန်းလေး တခုထားမယ်။ အဲဒီအခန်းဟာ ကြမ်းပြင်အောက် တထွာလောက်ဖြစ်ဖြစ် နိမ့်ထားမယ်။ အဲတာမှ ငါဟာဘဝင်ခိုက်တာ နည်းမယ်လို့ တွေးခဲ့တာပါ။ ကလေးတွေးပေါ့။
လက်တွေ့ဘဝမှာတော့ ဆရာဝန်၊ နိုင်ငံရေးလုပ်သူ၊ ပြည်ပနိုင်ငံကြေီးတွေမှာနေရတဲ့သူသာဖြစ်လာပေမဲ့ ခုထိ အိမ်မှာ စာကြည့်ခန်းလေး မထားနိုင်သေးပါ။
စိတ်ထဲမှာတော့ ကြာလေကြာလေ တထွာမက နိမ့်နိမ့်ကျလာပါတယ်။ စာအုပ်တွေ ပိတာခံနေရာသူလည်းမဟုတ်ပါ။
Unmarried Women မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ထောင်မပြုသူ အမျိုးသမီးများနေ
မြန်မာပြည်မှာလို့ရေးတာကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းလိုလိုက မြန်မာလို့သာရေးကြတယ်။ တိုင်းပြည်လည်းမြန်မာ၊ လူမျိုးလည်းမြန်မာ နာလည်းရတကယ်ခက်တယ်။
၂ဝ၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအရနဲ့ သတင်းတွေအရ မြန်မာပြည်မှာ အမျိုးသမီးအရေအတွက်က အမျိုးသားတွေထက် နည်းနည်းပိုများတယ်။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ထောင်သားမွေးရမဲ့အရွယ်ရှိ အမျိုးသမီးတွေက အိမ်ထောင်ပြုကြတာနည်းလာလို့ ကလေးမွေးဖွားနှုန်း ကျနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ကိန်းဂဏန်းနဲ့ပြောရရင် အသက် ၄၅ နှစ်နဲ့ ၄၉ နှစ်ကြား အမျိုးသမီး တွေထဲက ၁၄% ကနေ ၁၅% တို့ဟာ အိမ်ထောင်မရှိကြတာတွေ့ရတယ်။
ဘာလို့ အိမ်ထောင်မပြုသလဲဆိုတဲ့ သုတေသနတွေလည်း လိုပါသေးတယ်။ တင်ပြသူပညာရှင်က လူဦးရေပေါ်လစီသစ် ရှိသင့်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မိသားစုစီမံကိန်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ ကလေးသူငယ် စောင့်ရှောက်ခြင်းတွေကိုပြောတာပါ။ တပြည်လုံးအတိုင်းအတာအရတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကလေးမွေးနှုန်းဟာ ဒေသတွင်းမှာ မြင့်မားပါတယ်။ တခြား အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ပျမ်းမျှ အမျိုးသမီးတယောက်ကနေ ကလေးမွေးနှုန်း ၂့၅ ယောက်ရှိပါတယ်။ အိမ်ထောင်ပြုကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေချည်းသာတွက်ရင် ၅ ယောက်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွါးရေး ပိုတိုးတက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၁့၅ ယောက်သာ ရှိတယ်။ တောပိုင်းနေအမျိုးသမီးတွေက ကလေးမွေးတာ ပိုများကြတယ်။ ကလေး ၆ ယောက်၊ ၇ ယောက်မွေးကြတယ်။
ဘာသာရေးအစွန်းရောက်တွေ ထောက်ပြချက်က မမှန်ပါ။ မွတ်ဆလင်ဦးရေ နည်းနည်းတက်လာတယ်လို့ အစီရင်ခံစာမှာ ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကစာရင်းအရ မြန်မာပြည်မှာ မွတ်ဆလင်ဦးရေ ၄့၎% ရှိခဲ့တယ်။ ၁၉၈၃ ခုနှစ်က ၃့၅% ရှိခဲ့လို့ တိုးလာတာ သိပ်မများလှပါလို့ ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပါတယ်။ ဒီကိန်းဂဏန်းထဲမှာ ရခိုင်ဒေသက မွတ်ဆလင် ခန့်မှန်းချေ တသန်း ၉ သောင်းအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလူတွေကို ချန်ပြီးတွက်ချက်ရင် မွတ်ဆလင် ၂့၃% သာရှိပါမယ်။ အထောက်အထားမခိုင်မာတဲ့ပြောဟောချက်တွေနဲ့ အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ အငြင်းပွားဘွယ်ရာ ဥပဒေတွေ၊ အမိန့်တွေ ရှိနေလို့ အခုအစီရင်ခံစာ ထွက်လာတာ နောက်ကျတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အစီရင်ခံစာအရ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဦးရေ ၈၇့၉% ရှိပါတယ်။ ၁၉၈၃ တုန်းကတော့ ၈၉့၎% ရှိခဲ့တယ်။ သိသိသာသာ တိုးလာတာကတော့ ခရစ်ယန်ဦးရေပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃ဝ က ၄့၉% ကနေ အခု ၆့၂% ဖြစ်လာတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာအချက်တခုကတော့ ကလေးသူငယ် အသက် ၁ဝ နှစ်ကနေ ၁၇ နှစ်ကြား၊ ၅ ယောက်မှာ ၁ ယောက်ဟာ ကျောင်းနေကြရမဲ့အစား အလုပ်ထွက်လုပ်နေကြရပါတယ်။ စုစုပေါင်း ၁့၇ သန်းရှိတယ်။ လူဦးရေ တသန်း တို့ဟာ လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေ လိုအပ်နေကြတယ်။
အလုပ်လုပ်ကြရာမှာတော့ အမျိုးသားတွေက ၈၅% ရှိလို့ အသက် ၁၅ နှစ်ကနေ ၆၄ နှစ်ကြား အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်လုပ်တာ နည်းလွန်းနေတယ်။ အလုပ်လုပ်သူ ၅၂% တို့ဟာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာလုပ်နေကြတယ်။ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်နေသူတွေလည်း ကာယ (စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်တောနဲ့ ငါးဖမ်း) အလုပ်တွေမှာ အလုပ်နေကြရတယ်။ လူဦးရေ ၃ ပုံ ၁ ပုံကသာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးနိုင်ကြတယ်။
ဝဒေသမှာ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်တဲ့ထဲမှာ မပါတာလည်း ထူးခြားနေပါတယ်။ အရင် ၂ဝဝ၃ ကောက်ယူစဉ်ကလည်း မပါခဲ့ဘူး။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်ကကောက်ယူထားတဲ့ စာရင်းဇယားတွေအရ ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာ လူဦးရေ ၄၇ဝ,၇၆၄ ယောက်ရှိတယ်။ စာတတ်မြောက်မှု ကျား ၂၅% နဲ့ မ ၂ဝ% သာရှိတယ်။ တပြည်လုံးမှာ စာတတ်မြောက်မှု ကျား ၉၂့၆% နဲ့ မ ၈၆့၉% ရှိပါတယ်။ ပိုက်ကလာတဲ့ရေနဲ့ အိမ်သာရနိုင်သူ ၃ဝ% သာရှိတယ်။
နောက်ဆုံးကောက်ယူမှုအဖြေတွေကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် သြဂုတ်လထဲမှာ ကြိုတင်ထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပါတယ်။ လူဦးရေစုစုပေါင်း ၅၁,၄၁၉,၄၂ဝ ထဲမှာ ယောက်ျား ၄၈့၂% နဲ့ မိန်းမ ၅၁့၈% ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁ဝ,၈၈၉,၃၄၈ စုရှိလို့ အိမ်ထောင်စုတခုမှာ လူ ၄့၎ ယောက်ရှိတယ်။ အပြည့်အစုံကို ၂ဝ၁၅ မေလမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ လူဦးရေစစ်တမ်း ကောက်ယူရာမှာ အခက်အခဲတခုကတော့ တရုပ်ပြည်ကနေဝင်လာကြသူတွေနဲ့ ရခိုင်ဒေသမှာ နာမည်သစ်နဲ့ ရောက်နေကြသူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ပမှာနေထိုင်ရသူဦးရေ ၃သန်းကနေ ၅ သန်းလောက်ထိရှိနိုင်တယ်။
၂ဝဝဝ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးအစီရင်ခံစာရ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး မြန်မာပြည်ဟာ ကျန်းမာရေးစနစ်အဆင့် အောက်ဆုံးနိုင်ငံရဲ့အထက်မှာသာရှိပါတယ်။ မွေးစကလေးသေနှုန်း အရှင်မွေး တသိန်းမှာ ၆၂ ယောက် ရှိနေခဲ့တယ်။ လူ့သက်တမ်း ပျမ်းမျှ ၆၆့၈ နှစ်သာရှိတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ၇၄ နှစ်ရှိတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာ ပင်းယခေတ် ၁၃၅၉ ခုနှစ်က သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ခဲ့တာ အစောဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ၁၉၅၃-၅၄ တုန်းကတခါနဲ့ နောက်မှာ ၁၉၇၃ နဲ့ ၁၉၈၃ မှာတခါကောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၃၁-၃-၁၉၈၃ နေ့က လူဦးရေ ၃၅,၄၄၂,၉၇၂ ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ အခု လူဦးရေတိုးနှုန်းဟာ ၁၉၇ဝ ကျော်နှစ်တွေထက် တဝက်မရှိတော့ပါ။ အိမ်ထောင်ပြုသူ အမျိုးသမီးဦးရေနည်းလာက အချက်တခုလို့ယူဆရပါတယ်။